TRINITERA: VANIM-POTOANAN'NY PAKA
Raha miresaka momba ny finoana an’i Kristy nitsangan-ko velona isika dia mazàna lasa resaka habobo no atao. Terena hino ny tsy hain’ny tena hazavaina akory ny olona. Tsy misy afaka mampita ny finoana manko afa-tsy izay mino ihany.
Dia iza no mino? Ahoana no hahatsapantsika fa tena mpino isika? Sa dia atao valy boraingina fotsiny hoe rehefa mino ianao dia tsara, tsy mino ianao, raharahanao izany...
Raha mahaliana anao, tohizo